Omnifone, mutsva wemimhanzi kuwanikwa kweApple | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti Apple yemasimbaose ichangobva kuwana iyo nyowani gore-based mimhanzi mupi, sekureva sosi yemukati yakaita kuti chiitiko ichi chizivikanwe ne MacRumors. Pakutanga kwemwedzi, zvakanzwisiswa nezvekutengwa kwezvinhu zvese zvekambani yezvinhu zvekuona nekuona kweinosvika huwandu hwemamiriyoni gumi emadhora.
Kunyangwe mutengi asina kusimbiswa, zvinoita sekunge iyo Cupertino-based kambani yakatenga iyo kambani yeChirungu, zvinoenderana nezvinyorwa zvinoitwa nezve zvakataurwa kutengesa. Ndeipi haina kuwana Apple ndiyo kodzero dzepamutemo dzakapihwa naOmnifone, kunyangwe ichisanganisira "rezinesi rehumambo" mumitemo yekutenga.
Uye ndeyekuti kambani yemimhanzi iri mugore ine ma patents akati wandei ane chekuita nekurodha mumhanzi, manejimendi kodzero, uye kurudziro yemazano, ayo anogona kuve anokwezva ekutumira zvemukati.
Kunze kwezvo, iyo mhando yakashanda chikuva chayo nezvibvumirano zvakasiyana uye nekubatana nemakambani se LG, Samsung, Vodafone, Blackberry uye Sony, pakati pevamwe. Kutevera kuwanikwa uku, Omnifone yakagumisa hukama hwayo navo, uye tinoziva kuti vamwe vataura nezvekuparara uku vachipembedza kutengwa kweOmnifone "nekambani hombe." PonoMusic, iyo yakapa zvibvumirano zveiyi zvivakwa zvekudyisa chitoro chayo chepamhepo, yanga isingawanikwe kwenguva pfupi kubva zvataurwa.
Iyo kambani, akaunganidza zvikwereti zvakasiyana izvo hazvina kubatanidzwa mukutenga uye yakapfuura nenguva dzakaomarara, ichifanira kumisa vashandi makumi manomwe nenomwe muna Chivabvu apfuura pavakange vasingakwanise kubhadhara zvakabhadharwa nevashandi vese, uye kutyora zvibvumirano zvekudyidzana nemakambani akaita saSony neBlackberry pakuvharwa kweMusic Unlimited services neMusic BBM, zvichiteerana.
Kubva pakutanga zvaifungidzirwa kuti Apple inogona kufarira pfuma yaOmnifone, sekureva Music ally muna Chivabvu, uye ikozvino iko kutenga kwave kwaitwa, zvinoita sekunge hapasisina kupokana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Omnifone, mutsva wemimhanzi kuwanikwa kweApple
MacOS Sierra 2 Ruzhinji Beta 10.12 Zvino Yave Kuwanikwa
Pendrive yako yasara iine huwandu hwe200 Mb here? Ona maitiro ekugadzirisa.